Madaxweyne ku xigeenka Microsoft ayaa sharaxay sababta uu u adeegsado iPhone | Wararka IPhone
Madaxweyne ku xigeenka Microsoft ayaa sharaxay sababta uu u adeegsado iPhone
Shalay waxaan kugula socodsiinay warqada cadeynta ee madaxweyne kuxigeenka nidaamka howlgalka ee Microsoft, markii aad dhajineyso qoraal ku saabsan shabakada bulshada ee microblogging oo leh iPhone safarkiisii ​​ugu dambeeyay ee Japan intii uu ku maqnaa fasaxa. Qaar badan oo maskaxda ka mid ah oo geesinimo leh ayaa bilaabay inay kaftan ka sameeyaan arrintaan Dhacdo la mid ah wixii ku dhacay Furayaasha Alicia dhawr sano ka hor markii BlackBerry ay kiraysatay si ay kor ugu qaado faa'iidooyinka shaashadda ugu horreysa ee BlackBerry. Sida muuqata Alicia Keys ayaa gacanta saartay laakiin ma aysan isticmaalin taleefanka, tan iyo markii ay tweet gareeysay qalabkeeda caadiga ah, ee iPhone.
Taasi waa dhibaatada marka ay timaado adeegsiga shaxanka saameynta, hadaad runti aqoon u lahayn sheyga aad iskudayeyso inaad kobciso. Laakiin markii la iska dhaafo gafkan, Joe Belfiore, madaxweyne ku xigeenka Microsoft ee mas'uulka ka ah qaybta mobilada ee shirkadda iyo mawduuca muranku ka taagan yahay, ayaa u soo baxay si uu u caddeeyo isticmaalka iphone halkii uu ka isticmaali lahaa aaladda shirkadda:
Aad ayey muhiim noogu tahay inaan fahano sida wax soo saarka sida iPhone iyo aaladaha ku saleysan Android […] u taagan yihiin tartan loogu talagalay Windows Phone […] Sanadka gudihiisa waxaan fursad u haystaa inaan si qoto dheer u ogaado aaladahaan. Si loo fahmo faa iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka nidaamka deegaanka oo dhameystiran sida Windows, Android, iOS, waa inaad ku dhex noolaataa. Waa inaad dareentaa xooggooda iyo daciifnimadooda, hoos ha lagaa dhigo ama ha lagugu soo jiito. Dareennadaasna laguma qabsan karo adigoo ku ciyaaraya aaladda dhowr maalmood. Waa inaad barataa isku xirnaanta adeegsadaha, sawiro soo dhig, adeegso barnaamijyada, wadaag faylasha… wax walba.
Haddii aan ku dul wareegno akoonkiisa Twitter (@joebelfiore), waan hubin karnaa sida qaar ka mid ah tweets-ka Wuxuu ka qoraa aaladaha Windows Phone, kuwa kale wuxuu ka qoraa bogga Twitter-ka, kuwa kale wuxuu ka qoraa aaladda Android iyo sidoo kale, sidii horeyba loogu soo bandhigay iPhone-ka.
Joe keligiis maahan mana noqon doono qofkii ugu dambeeyay ee sarsare ee shirkad soo saarta qalabka mobilada oo isku dayaya inuu barto nidaamyada kale ee hawlgalka iyadoo la adeegsanayo aalado tartamaya inta badan sidii caadiga ahayd. Haddayna ahayn, aan aragno sida shaqooyinkaas ay Apple ku kordhinaysay macruufka noocyadoodii ugu dambeeyay ay halkaas u gaareen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Madaxweyne ku xigeenka Microsoft ayaa sharaxay sababta uu u adeegsado iPhone
Waa caadi. Waa qiil loo heli karaa.
Talaabooyinka Rafael dijo
Kadib shitkii taariikhiga ahaa, wax ay ahayd in la allifo sax miyaa?
Ku soo jawaab Rafael Pasos
Waxaan ilaaway inaan dhaho ninka waa wasakheeyaa foolxumo, ilaahay dartii!
cadaabta haa a .ajajajjjajaja